Anyị na-enyocha Huawei Mate 20 Pro, igwefoto na obodo kwụụrụ site ọkọlọtọ | Gam akporosis
Miguel Hernandez | | Noticias, Nyocha
El Huawei Mate 20 Pro na-aga n'ihu na-etinye uche nke ukwuu nke anya nke ndị ọrụ ụbọchị ole na ole ka ọ gachara, nke bụ eziokwu bụ na na ọnụahịa a, ụlọ ọrụ ndị China ekwuola ka ha jikọta n'otu ngwaọrụ niile njirimara ndị ahụ enwere ike ịchọrọ nke kachasị elu njedebe. Ọ bụrụ na ị hụbeghị nke anyị akpa echiche ị nwere ike ịgafe site na njikọ a iji lee ya anya.
Dị ka anyị kwere nkwa, anyị nwere ebe a nyocha miri emi nke Huawei Mate 20 Pro, ọnụ nke hapụlarị anyị ezigbo mmetụta na nke edobere ka ọ bụrụ nke kacha mma nke 2018 ma eleghị anya akụkụ nke 2019. Nọnyere anyị ma chọpụta atụmatụ na arụmọrụ nke Huawei Mate 20 Pro na nyocha anyị.
Dị ka ọ na-eme mgbe niile, anyị ga-eme njem dị mkpirikpi na njirimara niile na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche, yana echiche anyị n'eziokwu banyere arụmọrụ nke ndị a na-enye onye ọrụ ọkọlọtọ kwa ụbọchị. Anya dị egwu nke Androidsis n'oge a na-atụgharị n'elu Huawei Mate 20 Pro, ngwaọrụ nke na-abịakwute anyị nwere atụmanya dị eluỌ ga - enye anyị ihe niile anyị tụrụ anya n’aka ya? Lezienụ anya n'ihe niile anyị ga-ekwu maka ọdụ a dị egwu. O sina dị, Huawei Nwunye 20 - 6.53 Smartphone na Case Pack.
1 Nzube na ihe: Huawei na-etinye ihe niile na ọrụ nke di na nwunye
2 Akụrụngwa: Nwunye 20 Pro anaghị ekpuchi, ntakịrị ihe niile
3 Ngosipụta: Obere obere “notch” nke n’emeghi ka ogwe AMOLED zoo
4 Ese foto: Ihe kachasị mma na ahịa
5 Nnwere onwe na ngwanrọ: Mgbe ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, Huawei mere ya
6 Ihe editọ kwuru: Ikekwe nke kacha mma gam akporo nke 2018
6.4 Nke kacha mma
Nzube na ihe: Huawei na-etinye ihe niile na ọrụ nke di na nwunye
Anyị na-ahụ onwe anyị na-arụpụta nke anyị nwere obere ihe ịtụle. Obi abụọ adịghị ya ihe mbu nke dọtara uche anyị na nhazi igwefoto, ma anyị ga-arara akụkụ sara mbara karị na nke ahụ n'ikpeazụ. Na ihu, akụkụ ahụ dị n'akụkụ abụọ ngwa ngwa dọọrọ uche anyị, ihe ruo ugbu a naanị ụlọ ọrụ South Korea bụ Samsung nwere n'ọkwá dị elu ma nke ahụ dabara Huwei Mate 20 Pro nke ọma. button, na ekpe anyị na-ekpe na-eji ire ụtọ imewe. Otu ihe a na - eme na akụkụ nke elu ebe anyị nwere naanị infrared sensor. Ihe na-agbanwe na ala, anyị nwere njikọ USB-C na kaadị kaadị, ma achọkwala oghere maka ọkà okwu, Huawei chọrọ imepụta ihe site na ime ka ọdụ USB-C a bụrụ ọkà okwu, ịba uru bara uru, nke a na-ahụtụbeghị mbụ na nke ahụ ahapụla anyị ezigbo uto n'ọnụ anyị.
Akụkụ: 157,8 x 72,3 x 8,6
Arọ: 190 grams.
O doro anya na aluminom ya, iko ahụ dị mfe (ọ dị mfe ịnweta unyi na mbipụta ndị na-enweghị mkpuchi mkpuchi) na ntanetị nke ihuenyo -eme ka anyị na-eche na oge mbụ na anyị na-eche ihu a ọnụ nke ndị kasị adịchaghị. Ọ na-adị oke mma na aka, ọ dị mma ma buru oke ibu.
Akụrụngwa: Nwunye 20 Pro anaghị ekpuchi, ntakịrị ihe niile
Nka na ụzụ nkọwa Huawei Mate 20 Pro
Nlereanya Mate 20 Pro
Ihuenyo 6.39-anụ ọhịa OLED nwere mkpebi QHD + na 19.5: 9 ruru 538 PPI
Nhazi Huawei Kirin 980 (8 cores (2x Cortex-A76 na 2.6 GHz + 2x Cortex-A76 na 1.9 GHz + 4x Cortex A55 na 1.8 GHz))
Nchekwa n'ime 128 GB (Gbasaa na kaadị NMCard)
Igwefoto na-aga n'ihu 40 + 20 + 8 MP nwere oghere f / 1.8 f / 2.2 na f / 2.4 LED flash na 4K / 30FPS ma ọ bụ 1080p / 120FPS ndekọ yana Zoom x3
Igwe n'ihu 24 MP na f / 2.0 na ndekọ Full HD
Njikọ A-GPS na GPS Bluetooth 5.0 USB Type-C Wifi 802.11 ac na LTE Cat 21 na Dual NanoSIM (ahịa dabere)
Nche Onye na-agụ ihe ntanetị na ihuenyo ihu 3D
Nchedo IP68 fim na mgbochi-cracking nchedo
Batrị 4.200 mAh nwere oke 40W ngwa ngwa na ikuku 15 W
Ahịa 1049 euro
Maka nyocha anyị, anyị anwalela ụdị RAM 6 GB nke na-enye akara na Antutu Ihe 270.728, na-eti Xiaomi Mi 8 ma ọ bụ Samsung Galaxy S9 +.
Ngosipụta: Obere obere “notch” nke n’emeghi ka ogwe AMOLED zoo
Anyị na-ahụ na nke a Huawei Mate 20 Pro a Ogwe 6,3-inch na mkpebi 1.440 x 3.210, gịnị ga-enye anyị mkpebi QHD + na anyị ga-enwe ike hazie ka ọ masịrị anyị dabere na mkpa anyị, ihe kwesịrị inwe ekele maka ya na nke ahụ na-akwalite nnwere onwe nke ukwuu. Mkpebi a na-egosi obere mkpebi ịrị elu maka Huawei P20 Pro dịka ọmụmaatụ. N'ihi ya, anyị na-enweta otu nke kasị mma etoju nke nkọ na ahịa, na n'ezie karịa ezuru a kpochapụwo eji nke a ngwaọrụ na ndị a e ji mara. Na-akwado oriri ọtụtụ site n'inwe gị 19,5: 9 obosara mbipute, ọzọ na-agbakwunye na oke ọnụọgụ. Agbanyeghị, EMUI na-eji sistemụ nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi dabere na iji iji gbatịkwuo ndụ batrị.
Anyị enweela ahụmịhe kachasị mma n'èzí, na-enweghị nsogbu ọ bụla ị na-elele ihuenyo na ọnọdụ dị mma karịa ntụgharị uche nke ihe ọ bụla AMOLED panel na-egosi. Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ China jikọtara iji ogwe aka na-enye arụmọrụ ka mma n'ihe gbasara ọdịiche, mkpebi na nnwere onwe. Okwesiri ighota na EMUI na-enye ohere nke izoputa ihe site na igbanyụọ pikselụ gbara ya gburugburu, si otú a na-emeju ndị mmegide ya. Anyị nwere na nkenke pasent nke ihuenyo eji 86,9%, nke na-adịghị njọ ma ọlị, ọ bụ ezie na nwanne ya nwoke karịrị ya Huawei Mate 20 karịrị ya.
Ese foto: Ihe kachasị mma na ahịa
Huawei choro imeputa ohuru na ihe eserese o yiri ka o gara nke oma. O meela Huawei Mate 20 Pro na nhazi nke igwefoto megide ugbu a nke ndị nrụpụta ndị ọzọ na-enye, na ozugbo anyị were foto ole na ole anyị ghọtara na ọ mere ya maka ọdịmma anyị, ọ bụ ezie na ngwanrọ ahụ ka nwere otutu ikwu banyere ya. Anyị nwere sensọ atọ, otu nwere 40 MP na f / 2.8, onye ọzọ nwere 20 MP na f / 2.2 yana onye ọzọ nwere 8MP na f / 2.4, na ha na-arụkọ ọrụ nke ọma. Ihe mbụ nke dọtara uche anyị bụ na anyị si na inwe mbugharị Zoom x2 dị ka nke ọtụtụ ndị na-asọmpi asọmpi nwere, na-ekpori ndụ a Zoom x3 na nke ọzọ dị egwu Zoom x5, niile na-ekele njikọta nke telephoto lens na obosara lens na nke gụrụ igwefoto ya.
Nchikota nke aka HDR ya na ọgụgụ isi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụzọ agbapụ na nkwado ngwanrọ nke ngwa igwefoto nke Huawei nwere yana ị nwere ike ịhụ n'ụzọ zuru ezu na nyocha vidiyo anyị na-enye ezigbo ahụmịhe. HDR na-enyere anyị aka imeziwanye agba dị iche iche ọ na - ejide, na - ewepu nchacha ọkụ, ihe amaolarị na ọdụ ndị ọzọ. Nke bụ eziokwu Encekpụrụ ọgụgụ isi nke ọgụgụ isi egosibeghị anyị ka mma N'ozuzu, ezigbo aka mgbe ị na-ese foto ahụ, n'eziokwu, ọ ga-ejedebe na ịkọwapụta agba ndị dabere na ụdị njide anyị were na ọnụọgụ nke ọkụ ọ na-enweta, ikekwe ọ ka mma ịhọrọ maka ijide ihe okike. Anyị na-ahapụrụ gị gallery nke foto na-enweghị edezi ka ị nwee ike ịghọta ike ya maka onwe gị.
Mgbe anyị na ndekọ ndekọ, anyị na-ahụ ohere ịnweta mkpebi 4K / 30FPS ma ọ bụ mkpebi 1080p / 120FPS na Zoom x3 na a ezigbo mma stabilization dị ka ị pụrụ ịhụ na video-analysis. Na ọkwa vidiyo, Huawei Mate 20 Pro a adịghị ada mbà, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ. N’ụbọchị anyị n’ụbọchị a, anyị achọpụtala nsonaazụ jọgburu onwe ya n’ogo nke ijide ụda, ebe vidiyo na-arụ ọrụ nke ọma site na ngwanrọ, nke na - ewepụta obere oge “Oge na-adịghị anya” n’etiti ihe anyị na-ahụ na ihuenyo na ihe anyị na-ejide, na-ekele dị ka anya dị ka ị na-akpa lee anya na weghaara ọdịnaya. Anyị na-echeta na anyị ga-enwe ike ịnweta vidiyo ngagharị nwayọ ruo 960 FPS.
Selfie Eserese Ime ụlọ
Nightkpụrụ abalị abalị
Macro na-enweghị HDR
Ihe kpuru ìsì
Anyị na-aga n'ihu igwefoto, ebe Huawei na-anọpụkwa site na mmiri ndị ọzọ ma kpebie ịgụnye naanị otu ihe mmetụta, na-akwado ya site na ọgụgụ isi ya. Ihe mmetụta ihu a na-enyekwa anyị ohere ịse foto na ọnọdụ eserese yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikike niile anyị hụrụ na ndị ọzọ nke ihe mmetụta ahụ, agbanyeghị, anyị chọpụtara na ọ na-arịa otu nsogbu ahụ dị ka ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri Asia ndị ọzọ, ọtụtụ sọftụwia na "ọnọdụ mma" na ọbụna agbanyụrụ arụ na-eme ka anyị nwee ihu ọma karịa nke anyị nwere n'ezie. Agbanyeghị, igwefoto a n'ihu ga-achọ ntakịrị "nka" n'akụkụ onye ọrụ iji nweta nsonaazụ ọma, o yiri ka ọ enweghi usoro iji nweta ezigbo nsonaazụ, nke ahụ nwekwara ike ime ka ị daa mbà ma ọ bụrụ na iji igwefoto ya kachasị arụ ọrụ nke ọma.
Nnwere onwe na ngwanrọ: Mgbe ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume, Huawei mere ya
Nwunye 20 Pro a gụnyere batrị nke 4.200 mAh Na ihe ijuanya anaghị emetụta oke ma ọ bụ ịdị arọ nke ngwaọrụ ahụ, n'eziokwu, ọ na-esiri m ike ikwenye na ha gaara etinye batrị ahụ ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka eziokwu ahụ bụ na nnwere onwe dị adị nke ya bụ ọhụụ. Anyị enweela ike inweta n'etiti awa 12 na 16 nke ihuenyo dabere na ojiji anyị na-enye ọnụ, Ọ bụ ezie na ụta dị na Huawei na njikwa batrị ya nwere ọgụgụ isi ekele maka EMUI 9.0. Ọ bụ ya mere anyị ji adị mfe ịbanye ụbọchị nke abụọ eji na-enweghị ịdọrọ eriri. Mana Huawei lebara anya na ịkwanye Mate 20 Pro a abụghị nsogbu. Maka ya O kwadebere anyị chaja ngwa ngwa nke nwere ike inye anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị abụọ nke nnwere onwe naanị nkeji 58 ịkwụ ụgwọ ... N'akụkụ a enwere m ike ịsị "chapeau".
Ikuku Nchaji na-adịghị anya n'azụ, dịkwa na ya "ngwa ngwa" mbipute na n'ụzọ zuru ezu ebubo ekwentị na ihe karịrị abụọ na ọkara awa. Ma kpachara anya, ihe ịtụnanya anaghị akwụsị ebe a. Usoro mgbanwe nke EMUI gụnyere maka batrị na-enye anyị ohere ịhazigharị usoro nkwụnye ụgwọ ikuku na ntụgharị, nke ahụ bụ, ị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ọdụ ọ bụla dakọtara na usoro Qi naanị site na iweta ya nso na Huawei Mate 20 Pro, mkparịta ụka na ndị enyi na oge kọfị.
Otú ọ dị, EMUI nwere ike ịnya isi na ịdị mfe, kamakwa akụkụ ụfọdụ nke na-emebi ọrụ dị egwu na ọkwa ngwaike. Emebeghị ihe ngosi ahụ kpamkpam, yana ọ nwere ike iyi ka ọ na-esiri onye ahụ ike ime ihe ọ bụla na ọ bụghị eziokwu. Ọ dị mwute ikwu na ọ na-esiri anyị ike ịmata ọdịiche dị na EMUI 9.0 na nsụgharị ndị gara aga, ọ bụ ezie na a ka nwere ọtụtụ ọrụ na-aga n'ihu na ịrụ ụka adịghị ya na Huawei nwere ike imeziwanye ihe enyeregoro, o doro anya na ha nwere ike ime nke ọma, ọ dịkarịa ala na ọkwa nke ntụgharị na ịdị mfe nke menus.
Ihe editọ kwuru: Ikekwe nke kacha mma gam akporo nke 2018
Ọnụahịa ahụ enyela anyị ụfọdụ ezigbo mmetụta, karịsịa na-eburu n'uche ịdị nso na oge na ezigbo ihe ịma aka dịka iPhone XS Max ma ọ bụ Samsung Galaxy Note 9. Anyị doro anya na anyị achọtala onwe anyị n'ihu otu kachasị mma. Ahụmahụ na ngwaike ngwaike na gam akporo ruo taa, anyị ga-eto isi ihe dị mma ya wee gosi gị ihe masịrị anyị kacha nta banyere Huawei Mate 20 Pro.
Unyi si n’azụ
Anyị na-amalite mgbe niile na ndị ọjọọ. Dịka ị gụchara nyocha ahụ dum, isi ihe mechuru m ihu banyere ọdụm bụ Huawei si oyi akwa customization. Echere m na na mbipụta ọhụrụ a, ha ga-ahọrọ ịhapụ Android ka ọ na-enwu karịa, na-amụta site na mmejọ dịka o mere na Samsung. Agbanyeghị, Huawei gara n'ihu na-agbanwe ntụgharị na akụkụ ụfọdụ nke ọnụ ahịa ndị na-adịghị ka ihe na-adabaghị adaba, otu ihe atụ bụ na usoro mmegharị ahụ na-adịkarị ihe agaghị ekwe omume iji, megidere nzọ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Anyị hụrụ ihe ngwaike n'ozuzu ọnụ ya n'anya, site na imepụta ya, site na ihe owuwu ihe na o doro anya na ọ ga-ejedebe na ike enyere site na njikọta nke GPU na CPU. O doro anya na ọnụ adịghị akọpụtakwa ihe niile ị tụfuru. Otu ihe ahụ na-eme na igwefoto, na-enye ahụmịhe nwere ike ịmepụta ihe n'ahịa ebe ụlọ ọrụ na-agbasi mgba ike. Obi abụọ adịghị ya, na akụrụngwa, igwefoto na ọkwa dị iche iche, Huawei arụgoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri.
Huawei Mate 20 Pro - Nyocha
A ga-enyefe ọnụahịa a Site na 1.049 na ndị na-ebute ngwaahịa, ị nwere ike nweta ya site na njikọ a. Nwere ike ịzụta ya na Spain na nsụgharị ya nwa, Emerald Green na Midnight Blue, na-ahapụ nsụgharị Twilight nke nyocha a maka mbipụta pụrụ iche n'ọdịnihu. Versiondị RAM nke 6 GB nke anyị nwalere ga-enwe 128 GB nke nchekwa, mana ị nwere ike ịzụta ụdị RAM 8 GB na 256 GB nke nchekwa ma ọ bụ họrọ maka mmụba site na kaadị NM nke na-akwado 256 GB nke nchekwa dị elu na-echere ire ere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Anyị na-enyocha Huawei Mate 20 Pro, igwefoto na nnwere onwe site na ọkọlọtọ
N'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike imelite Pocophone F1 na gam akporo 9 Pie